किन परेनन् गौरवका आयोजना ? - Pradesh Today किन परेनन् गौरवका आयोजना ? - Pradesh Today
किन परेनन् गौरवका आयोजना ?
जेठ २१, २०७६ जीत सागर जी.एम.
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्षको बजेट चालु वर्षको तुलनामा आकार ठूलो देखिए पनि समग्रमा चालु वर्षकै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले बुधबार जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा गौरवका आयोजना दाङमा आउन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा दाङ किन पर्न सकेन् ? आम बहसको विषय बनेको छ ।
सत्तारूढ दलमा दाङबाट नेतृत्व गरेर जाने नेताहरू केन्द्रस्तरकै भए पनि गौरवका आयोजना पर्न नसक्नु नागरिकको गुनासो छ ।
संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नती,
दाङमा सिंचाईका लागि रोल्पाको माडी नदीमा डाइभर्सनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, मदनभण्डारी राजमार्गलगायतका योजना परेका छन् ।
दाङमा औद्योगिक क्षेत्र, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका ठाउँ केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु सरोकारवालाले बताएका छन् । प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि दाङ केन्द्र सरकारको उपेक्षामा किन ?
अनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा दाङका सरोकारवाला के भन्छन् त ? दाङमा गौरवका आयोजना कस्ता आउनुपथ्र्यो ? अनि दाङमा परेका योजना कार्यान्वयन होला त ?
यिनै विषयमा सरोकारवाला केही व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरेका छौँ । आजको प्रदेश टुडेको अंकमा सरोकारवालाको भनाई सारसंक्षेपमा ।
अहिले सामान्य नागरिकले सिटामोल पाउन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले रेल र पानीजहाज ल्याउने योजना अघि सारेको छ ।
रेल त ल्याउने तर रेलमा के पठाउने ?
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस घोराही
सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट राम्रो छ तर उत्कृष्ट पनि भन्न मिल्दैन् । समग्रमा परम्परावादी नै छ । चालुवर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार बढ्नु स्वभाविक नै हो । १२ खर्बबाट १५ खर्बमा बढ्नुलाई स्वभाविक नै मानिएको छ ।
मुख्य कुरा के भने कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन् भन्ने हो । यदि कार्यान्वयन हुने हो भने बजेट राम्रो छ ,उत्कृष्ट नभए पनि बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य , रोजगारलगायतका क्षेत्रलाई समेटेको छ तर बजेट कार्यान्वयनमा निकै समस्या देखिन्छ ।
बिगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था निकै कम देखिन्छ । चालुु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि ४४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको अवस्था छ । अब बजेटले दाङलाई छोयो कि छोएन भन्ने कुरा छ ।
दाङका लागि केन्द्र सरकारले पारेको भनेको तीनवटा योजना छन् प्रत्यक्षरुपमा । मदनभण्डारी राजमार्गको कुरा उल्लेख छ तर त्यो पनि कुनैबेला रोल्पाबाट जाने भनिन्छ, तर वास्तविक के हो थाहा छैन् ?
अनि अर्को योजना भनेको टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नती गर्ने भनिएको छ । अर्कोचाहिँ माडी डाभर्सनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले रेल ल्याउने कुरा गरेको छ स्वागतयोग्य पनि छ तर रेलमा के ल्याउने भन्दा के पठाउने ? भन्ने हामी अहिले गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईको पालोमा ल्याएको योजना अझै पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै अल्झिएको छ । दाङ अहिले यसरी विमुख हुनुमा राजधानी बन्न नसक्नु एउटा कारण हो । दाङले नेतृत्व पनि राम्रै पाएको छ तर काम राम्रो भने पाउन सकेको छैन् ।
विगतमा पनि दाङ केन्द्र सरकारको उपेक्षामा पथ्र्यो, त्यो अवस्था अहिले पनि कायमै छ । नागरिकले गरेका अपेक्षालाई नेतृत्वले पूरा गर्न नसक्दा जनता निराशा हुनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ ।
कृष्णबहादुर महरा दाङमा देखिए पनि उहाँले रोल्पाका लागि बढी प्रयास गर्ने गरेको पाइन्छ । उहाँले मदनभण्डारी राजमार्ग पनि रोल्पाबाट लैजाने प्रयास गर्नुभएको थियो तर त्यसो भएको छैन् जस्तो लाग्छ । अब हामीले सडक विभागमा बुझ्दा पनि त्यसो भएको छैन् भन्ने लागेको छ ।
दाङमा गौरबका आयोजना पर्न नसक्नु नै उपेक्षामा परेको नै हो । केन्द्र सरकारले दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन् । यो दुःखको कुरा हो । नाम पनि उल्लेख गरिएन् ।
टरिगाउँ विमानस्थलमा पनि स्तरोन्नती गर्ने भनिएको छ र बजेट कति भन्ने उल्लेख नै गरिएन् यो पनि दंगालीका आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ । अनि अर्को कुरा सरकारले निकै ठूला महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ तर जनता सामान्य आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित छन् ।
सरकारले रेल ल्याउने कुरा गरेको छ स्वागतयोग्य पनि छ तर रेलमा के ल्याउने भन्दा के पठाउने भन्ने हामी अहिले गम्भीर हुन आवश्यक छ । हामीहरु विदेशबाट आयात धेरै गछौँ तर विदेश निर्यातमा निकै कम छ, अर्थात् छदैँ छैन् भन्दा पनि हुन्छ ।
हामीले विदेशबाट १२ खर्बको सामान आयात गर्ने गरेका छौँ तर निर्यात भने ८७ अर्बको भन्दा बढी हुन सकेको छैन् । त्यसैले सरकारले रेल र पानी जहाजसँगै देशमा कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ
भन्ने दीर्घकालिन योजना बनाउन आवश्यक पनि छ । जे होस् सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट सन्तोषजनक त छ तर कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्नेमा हामीहरु नागरिक छौँ ।
बजेटमा असन्तुष्ट दाङ
नारायण प्रसाद भुसाल
बजेट राम्रो छ, समावेशी खालको छ, तर निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनका लागि अर्थात् दाङको क्षेत्रमा निराशाजनक देखिन्छ । उत्पादकको हकमा किसानहरुका लागि पनि राम्रो छ । जस्तै कसैलै काउली लगाउनुभएको छ, कसैले टमाटर उत्पादन गर्नुभएको छ ।
किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनले बजार पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । अहिले सरकारले आगामी वर्षदेखि बाहिरबाट आयातित कृषि उत्पादनमा भन्सार कर वृद्धि गरेपछि किसानलाई थप राहत मिल्ने सक्ने अनुमान छ । अब स्वदेशी उत्पानले बजार पाउनुपर्छ भन्ने सरकारले जुन सोच बोकेको छ, त्यो स्वागतयोग्य नै छ ।
कृषि व्यवसाय गर्न चाहने कृषकका लागि सरकारले अनुदान रकमको समेत व्यवस्था गरेपछि कृषि पेशामा किसानको आकर्षण बढ्दै जाने देखिन्छ । नयाँ व्यवस्थामा जनताले परिवर्तन चाहेका छन् ।
जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि सरकारले गरेको प्रयास राम्रै छ तर हामी व्यवसायीले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौँ । सरकारलाई जसले राजस्व तिरेको हुन्छ त्यसको सरकारले सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेका छौँ । दाङकै हकमा पनि एकजना व्यवसायीको हत्या भयो ।
अहिले उहाँका परिवार सडकमा हुनुहुन्छ । सरकारले त्यस्ता पीडितलाई केहि न केहि राहत दिनुपर्ने हो तर सरकारले चासो दिन सकिरहेको छैन् ।
अहिलको अर्थमन्त्री धेरै बौद्धिक क्षेत्रबाट आउनुभएको छ, उहाँचाहिँ पूर्व गभर्नरसमेत भएर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे हामीले त्यो आशा गरेका थियौँ तर हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्न सक्नुभएन् ।
अब दाङको सवालमा केही विषयमा केन्द्र सरकारले सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास हामीलाई हुँदाहुँदै पनि सरकारले विश्वास गुमाएको छ ।
दाङमा मेगा प्रोजेक्टका लागि करिब साढे पाँच सय विगाह जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन यो बजेटले सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशामा थियौँ तर त्यसो हुन सकेन् ।
संसदमा गएर रोकिएको त्यो विषय सम्बोधन हुन सकेन् । हामीलाई त लागेको थियो, औद्योगिक क्षेत्र घोषणामात्र सम्म त होला भनेका थियौँ । बजेट विनियोज भनेको अलि लामो पाटो थियो नाम लिनै कन्जुस गरियो ।
अनि अर्को कुरा तुलसीपुरकोे टरिगाउँ विमानस्थल स्तरोन्तती मात्रै भनियो तर बजेट उल्लेख गरिएन । इन्धन डिपोसहित हुने हो, अरु केहि हो, स्तरोन्नती भनेको अरु पनि पर्छन् ।
अब स्वास्थ्यतिर भने अञ्चल अस्पताल प्रादेशिक भयो, अब रह्यो राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुरा, अरु स्वास्थ्य विज्ञाानको विषयमा बोल्न मिल्ने तर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषयमा बोल्न नमिल्ने हुन्छ र ?
हामीलाई अहिलेको बजेटमा केन्द्र सरकारले निकै उपेक्षा गरेको छ । कि दंगाली जनताले पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन् भन्नुप¥यो, जनताले स्वास्थ्य सेवा पाएनौँ, प्रसूति सेवामा लिन गाह्रो भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ,
हामीले पनि सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदानका लागि निकै प्रयास गरेका छौँ तर केन्द्र सरकारले बजेटमा उपेक्षा ग¥यो, तथापि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको केही बजेट प्राप्त होला तर त्यो पर्याप्त हुँदैन् ।
मदन भण्डारी सडकको कुरा पनि द्विविधामा छ, कहिले रोल्पा भनेको छ, कहिले दाङ भनिएको छ तर वास्तविक के हो ? अझै अन्यौल छ । ठूला–ठूला मेगा प्रोजेक्टहरु छन् दाङमा जस्तै केबुलकारको कुरा थियो स्वर्गद्वारी जोड्ने,
कमसेकम केवलकार विस्तार गरिने छ, लगानीकर्ताहरु भित्र्याइने छ भन्ने आएको भए दाङप्रति केही भएको छ कि भन्ने हुन्थ्यो अब त्यो केही नुहँदा दंगाली सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
आएनन् गौरवका आयोजना
सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट राष्ट्रव्यापी रुपमा हेर्दा राम्रो छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने मुल उद्देश्यका साथ सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएका योजना राम्रो देखिए पनि दाङको सवालमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन् ।
केन्द्र सरकारका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल यहीबाट नेतृत्व गरेर गए पनि दाङमा गौरवका आयोजन पर्न नसक्नु दुखद् कुरा हो ।
एसियाकै ठूलो उपत्यका दाङमा प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि दाङ केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो की भन्ने हामीहरुलाई लागेको छ ।
सरकारले ल्याएको दाङका केही योजना पनि जनतालाई छारो हाल्ने खालका छन् । अस्पष्ट रुपमा योजना आएका छन् । जनताले निर्वाचित गराएर पठाएका नेतृत्वले जनताले अभिभावकको रुपमा लिएका छन् ।
तर नेतृत्वले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेको छैन् । बजेट ल्याउनुपुर्व दाङबाट नेतृत्व गरेर जाने नेताले सल्लाह, सुझाव प्रतिक्रिया लिनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन नसक्दा आज दाङमा गौरवका योजना आउन सकेका छैनन् ।
आज हामी दंगाली जनता सरकारले ल्याएको बजेटमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन् । अब निजी क्षेत्रको सवालमा हाम्रो छाता संठगन उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वागतयोग्य छ भनेको छ तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन् भन्ने सवाल छ ।
दाङमा औद्योगिक करिडोर बनाउने कुरा पनि केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन् । राम्रो शिक्षा हासिल गर्नका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्यको अवस्था पनि त्यस्तै जिल्लाका नागरिकले राम्रो स्वास्थ्य उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् ।
केन्द्र सरकारले घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञाान प्रतिष्ठानलाई उपेक्षा गरेको छ । राष्ट्रव्यापीरुपमा केन्द्र सरकारले ल्याएका योजना राम्रो भएपनि दाङमा गौरब गर्ने खालका योजना आउन नसक्दा हामीहरु निकै दुखी छौँ ।
केन्द्र सरकारले पहिलो बजेटमा पनि दाङलाई समेट्न सकेको थिएन् तर यो वर्षको बजेटमा समेट्छ की भनेको अहिले पनि झारा टार्ने खालका योजनालाई बजेट विनियोजन गरेको छ ।
दाङ किन केन्द्र सरकारको उपेक्षामा पर्छ ? आम नागरिकको प्रश्न छ । हामीले कहिले पाउँछौँ त गौरवका आयोजना ? पहुँच नभएको भए पनि हामीले पहुँच छैन् भनेर चित्त बुझाउन सक्थ्यौँ तर त्यो पनि छैन् ।
जनता खुशी हुने अवस्था छैन्
केहीदिन अघिमात्रै आएको बजेट खासै नयाँ लागेको छैन् मलाई । बजेटमा केह िनिकै महत्वाकांक्षी योजना पनि आएका छन् । जनता अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, खानेपानीजस्ता अभावमा अहिले छन् ।
ति महत्वाकांक्षी योजना पनि ल्याउनु त पर्छ तर सँगसँगै नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा दिनुपर्छ । अहिले सामान्य नागरिकले सिटामोल पाउन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले रेल र पानीजहाज ल्याउने योजना अघि सारेको छ ।
मुलुकमा स्थायी सरकार गठन भएपछि दोस्रो पटक आएको बजेट प्रथम पटकभन्दा केही सुधारात्मक त ल्याएको छ तर सन्तोषजनक छैन् । कर्मचारीको तलब वृद्धि,
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, किसानलाई पेन्सन ल्याएको छ, यो निकै राम्रो काम हो तर यसको दीर्घकालिन बनाउन सकिन्छ कि सकिदैन् निकै प्रश्नहरु आएका छन् ।
सरकारले ल्याएका दीर्घकालिन योजना सफल बनाउने भनेकै जनताको कर हो । सरकारले राजस्व लक्ष्य अनुसार उठाउन नसकिराखेको अवस्था छ । जहाँ कर उठ्ने ठाउँ हो त्यो ठाउँ भ्रष्टाचारको जालोमा छ ।
भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, निर्यातभन्दा पनि आयात बढेको छ जसका कारण पनि सरकारले ल्याएका माथि उल्लेखित योजना दीर्घकालिन हुन सक्दैनन् कि भन्ने पनि छ । अब दाङको सवालमा झन निकै कम योजना आएका छन् ।
दीर्घकालिन योजना धेरै आउन नसक्नु नै यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कृष्णबहादुर महरा, शंकर पोखरेलको नैतिकतामाथि उब्जिएको छ । किन गौरबका आयोजना पर्न सकेनन् त ?
दाङलाई केन्द्र सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण किन फेरिन सकेको छैन् । सम्भावना थुप्रै हुँदाहुँदै पनि दाङमा गौरबका आयोजना पर्न नसक्नु भनेको दंगालीका लागि दुखद् कुरा हो ।
दाङमा पर्यटनको सम्भावना प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि केन्द्र सरकारले पर्यटन विकासका लागि कुनै योजना ल्याएको छैन् । सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउने पनि भनेको छ तर दीर्घकालिन रुपमा पर्यटन विकास गर्ने गरी दाङको पक्षमा बजेट आएको छैन् ।
त्यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञाान प्रतिष्ठान पनि सरकारले राजनैति दृष्टिकोणमा हरेको महसुस हुन थालेको छ । अनि अर्को कुरा बजेट आउनुमात्र ठूलो कुरा होइन् यहाँ बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था निकै कम छ ।
बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन भने त ल्याउनुको अर्थ पनि छैन् । सरकारले ल्याएको बजेटमा दंगाली जनता खुशी हुने अवस्था छैन् । एक÷दुईवटा योजना आएका छन् ति पनि सबै टालटुल बनाउने खालका छन् । पहिलेदेखि उपेक्षामा पर्दै आएको दाङ अहिले पनि उहि पुरानै अवस्थाको छ ।
सकारात्मक तर चुनौतीपूर्ण
नेपाल निजमति कर्मचरीको आधिकारिक ट्रेड युनियन
सरकारले कर्मचारीलाई लामो समयपछि तलव वृद्धि गरेको छ तर महंगी बढिसकेको छ । लामो समयपछि कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको हो । कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनासाथ महंगी पनि बढ्ने हुँदा हामी कर्मचारी एकदम खुशी हुने भन्ने छैन् ।
सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्न नसक्दा कर्मचारीको तलब बढाएको कुनै अर्थ हुँदैन् । सरकारले सीमित व्यक्तिलाई रिझाउने गरी ल्याएको बजेटले आम नेपालीलाई अलि छुँदैन की जस्तो लाग्छ ।
सरकारले अस्वभाविक रुपले बढाउने महंगी नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । बिगतको तुलनामा बजेटको आकार पनि बढेको छ । यसलाई स्वभाविक मान्न पनि सकिन्छ । किनभने हरेक वर्ष एक÷दुई खर्ब बढ्नु भनेको खासै नौलो होइन् ।
सरकारले कर्मचारीलाई बढाएको तलबले पर्याप्त छैन् । किनभने अहिले सरकारले दुई÷तीन वर्षको फरकमा तलब वृद्धि गर्ने गरेको छ । यति लामो समय हुँदा पनि थोरै तलब वृद्धि गरेको छ यसलाई हामीले सन्तोषजनक पनि मानेका छैनौँ ।
कर्मचारीको तलब सीमित भएकै कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कर्मचारीलाई पर्याप्तरुपमा तलब बढाउनुपर्छ । आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ सरकारले ।
चालु खर्च बढेका कारण निजी क्षेत्रको लागत बढ्ने र समग्रमा अर्थतन्त्रको लागत बढ्ने भएकाले मुल्यवृद्धि समेत बढ्छ । पुँजीगत खर्चको आधार कम भएका कारण सरकारले दिएको साँढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन छ । निजी क्षेत्रको लागत समेत बढ्ने र समग्रमा अर्थतन्त्रको लागत बढ्ने भएका कारण मुल्यवृद्धि समेत बढ्छ ।
सोचेअनुसारको बजेट यसपालि पनि आएन, पूँजीगत खर्चको आकार न्यून भएका कारण साँढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन । सांसदका लागि ६ करोड बजेट छुट्याइनु अनुत्पादक हो,
अहिले त स्थानीय तहमा जननिर्वाचित सरकार आइसके, सांसदले अझै पनि बजेट माग्नु भनेको भ्रष्टाचारको दुलो खोज्नु हो । निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने सम्भावनासमेत कम रहेको भन्दै ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी लक्ष्य भेटाउन कठिन छ ।
कृषिजन्य सामग्रीको संरक्षण, समन्यायीक र गरिबी उन्मूलनमा जोड दिएको छ, बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत संरचनागत सुधार गर्न त्यति ख्याल गरेको भने देखिएन ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र नियन्त्रणमुखी बजेट आयो यसको पनि आलोचना हुन्छ नै, संविधानको मर्म अनुरुपको पनि भएन । जुन सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो त्यस्तो बजेट नआएको हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ ।
बृद्धहरुको भावनालाई समेट्ने कोशिस बजेटले गरेको छ । बजेट केही सकारात्मक र केही चुनौतीपूर्ण छ । दाङलाई पनि केन्द्र सरकारको बजेटले छुन सकेन् ।